आजदेखि स्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ - Yugantar Khabar | News Portal
Posted on January 17, 2022 by Basanta Pariyar
२०७८ माघ ३ गते, आजदेखि स्वस्थानी व्रतकथा प्रारम्भ भएको छ । केही मानिसहरू स्वस्थानीको नाम सुन्नेबित्तिकै ओँठ लेब्रयाउँछन् । केही मानिसहरू कथा सुन्छन्, व्रत बस्दछन्, तर त्यसबाट उपलब्धि के भयो ? के बुझियो ? के सिकियो ? यतातिर ध्यान दिँदैनन् । कथा भनेको कथा नै हो । न कथा सुनेर मात्र मुक्ति वा मोक्ष प्राप्त हुने हो, न जीवनमा जस्ताको तस्तै लागू हुने हो ।
असल र खराब के हो भन्ने बुझेर असल ग्रहण गर्ने र खराब त्याग्ने हो भने कथाले हामीलाई दिन सक्ने विषय धेरै हुन्छन् । जानेर गरिए के अन्धविश्वास र नजानेर गरे के विज्ञान ? बजारमा गएर चाहिएको वस्तु रोज्न सक्ने वनमा गएर फल फूल रोज्न सक्नेलाई पो बजार र वन दुवै अर्थपूर्ण हुन्छ र ! हाम्रो समाजमा अहिले हुर्केको प्रवृत्ति यस्तै छ । शास्त्रमा, परम्परामा मन पर्ने र मन नपर्ने विषय हुन्छन् । तर, मानिसहरू यी भित्रका असान्दर्भिक, असामयिक, हानिकारक विषय टपक्क टिपेर ज्ञानी र अभियन्ता बनेको देखिन्छ । यसो गर्नु धर्मको मर्म नबुझ्नु, अध्यात्मको अन्तर्यमा चियाउन नसक्नु र संस्कृतिको सरसता ठम्याउन नसक्नु नै हो ।
अज्ञात कालका विषयलाई आजको अवस्थामा अनुचित ढंगले मिसाएर कम्बलमा पोखिएको सातु झुसैसित उठाएर सातुको विरोध गर्नुजस्तै हो । स्वस्थानीको व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिनासम्म चल्दछ । यस कथाको प्रारम्भ विष्णु र उनको नाभिकमलबाट उत्पन्न ब्रह्मा, मधुकैटभ राक्षसको युद्धबाट प्रारम्भ हुन्छ । यो प्रसंग पृथ्वीको सृष्टिको रूपमा वर्णनबाट भएको छ । यसमा दक्ष प्रजापति, महादेव र सतीदेवीको कथा छ ।हाम्रो समाजमा कथा सुन्ने सुनाउने प्रचलन सर्वविदित नै छ ।
कथाको माध्यमबाट मूलतः ज्ञानको आदान-प्रदान हुने देखिन्छ । तर, सुन्नेहरू व्यक्तिगत र पारिवारिकरूपमा पूण्य प्राप्तका लागि भनेर नै कथा सुन्ने गर्दछन् । हिजोआज त सामाजिक कार्यका लागि चन्दा उठाउने प्रयोजनले पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा भव्य ‘कथामेला’ नै लाग्ने गर्दछ । ‘हिन्दू’ नाम गरिएको पूर्वीय परम्परामा विभिन्न उपलक्ष्यमा व्रत बस्ने र कथा सुन्ने सुनाउने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।
यी व्रत र कथाको अवधि कम्तीमा एक दिनदेखि बढीमा चार महिनासम्म चल्ने गरेको देखिन्छ । एक दिनका व्रत र कथामा एकादशीको व्रत र सबै एकादशीका कथाहरूलाई लिन सकिन्छ ।